Kudzidza masitaera: maviri akaipa nhau (asiwo maviri akanaka) | Kudzidziswa Kwekuziva
Avo vanoshanda mune zvepfungwa yekudzidza, dzidzo, dzidziso kana dzidziso zvakarongeka vanopedzisira vasangana nemubvunzo we "kudzidza masitaira". Iwo ekutanga mazano ayo anowanzo kuyedzwa kupasa anonyanya maviri:
mumwe nemumwe ane imwe nzira yake yekudzidza (semuenzaniso, kuona, kuongorora kana kinesthetic);
munhu wega wega anodzidza zvirinani kana ruzivo rwapihwa kwaari nenzira inoenderana nemabatiro ake ekudzidza.
Idzi ipfungwa dzinokatyamadza, idzo pasina mubvunzo dzinopa maonero akaomarara emamiriro ekudzidza (ayo anowanzoonekwa se "stale"); vanotitendera kuti titarise kuchikoro (uye nekupfuura) senge mamiriro anogona kuita zvine hunyanzvi uye neakagadzirirwa, dzidzo yakangogadzirwa.
Asi izvi ndizvo chaizvo here?
Pano panouya iyo nhau dzakaipa kutanga.
Aslaksen naLorås vakaita ongororo diki yezvinyorwa zvesainzi nezvenyaya iyi, vachipfupisa mhedzisiro yemishumo mikuru yekutsvaga; izvo zvavakaona, data riri muruoko, ingori izvi: dzidzisa zvinoenderana nemaitiro akasarudzika emunhu kudzidza (semuenzaniso, kuburitsa ruzivo mumafomati ekuona e "vatariri") hazvaizounza bhenefiti isinganzwisisike pane avo vanodzidza mune imwe nzira isiri yavo yavanoda.
Mupfungwa iyi, maitiro evadzidzisi vazhinji anofanirwa kudzokororwa, kunyanya tichifunga huwandu hwerimwe basa rinosanganisira kushandura kudzidzisa zvichitevera zvinoratidza izvo zvinoita kunge neuro-ngano pane chokwadi.
Saka chii chiri hukama pakati penzira dzekudzidzisa nekutenda zvine chekuita nemaitiro ekudzidza?
Pano panouya iyo yechipiri nhau dzakaipa.
Imwezve ongororo yemabhuku esainzi pamusoro penyaya iyi akataura kuti ruzhinji rwevadzidzisi (89,1%) vanoita kunge vanogutsikana nezvekunaka kwedzidzo kunoenderana nemaitiro ekudzidza. Hazvikurudzirwi ndezvekuti rutendo urwu harushanduke zvakanyanya sezvatinopfuurira nemakore ebasa mumunda (kunyangwe kana, izvo zvinofanirwa kutaurwa, vadzidzisi nevadzidzisi vane huwandu hwepamusoro hwedzidzo vanoratidzika kunge vasina kugutsikana neiyi nhema-nhema ).
Chii chekuita ipapo?
Pano panouya iyo kutanga nhau dzakanaka.
Nhanho yekutanga inogona kunge iri yekuparadzira ruzivo rwakakodzera panguva yekudzidziswa kwevateedzeri nevadzidzisi; izvi aiwa, hazviite sekutambisa nguva: kutaura zvazviri, mukati mekumwe kuongorora kwebhuku kunowanikwa kuti, mushure mekudzidziswa kwakati, chikamu chevadzidzisi vachiri kugutsikana nezvekubatsira kwenzira inoenderana nemitauro yekudzidza (mumasampuli kuongororwa, tinopfuura kubva paavhareji yekutanga 78,4% kusvika kune imwe ye37,1%).
Eya, vamwe vava kushamisika kuti kudzidza kwevadzidzi kunogona kuvandudzwa sei sezvo nzira yekudzidzira nzira isingaite senge inoshanda.
Zvakanaka, hezvino izvo zvino yechipiri nhau dzakanaka: matekiniki ekudzidzisa uye kudzidza anonyatsoita (kuyedzwa zvakaedzwa) kune e isu takatopira nyaya kwavari. Uye zvakare, isu tinodzoka kumusoro uyu munguva pfupi iri kutevera ne chimwe chinyorwa chinogara chakatsaurirwa kumatekinoroji anobudirira.
Natsiridza kuzvidzora-wega kwekudzidza uine kuraira kumwe chete
Dyslexia: ndeipi nzira yekufunda?
Iyo nhanho yedzidzo inokanganisa iyo IQ?
Kubudirira mune zvedzidzo. Kufunganya, kukurudzira uye kutarisisa: chii chakakosha kuita zvakanaka muchikoro?
Kukurudzira kunorovera IQ 1 - 0!
Aslaksen, K., & Lorås, H. (2018). Maitiro-akasarudzika ekudzidza maitiro hypothesis: mini-ongororo. Frontiers mune zvepfungwa, 9, 1538.
Newton, PM, & Salvi, A. (2020, Zvita). Kutenda kwakadii mumastyle ekudzidza neuromyth, uye zvine basa here? A pragmatic yakarongeka kuongorora. In Miganhu muDzidzo(Vol. 5, peji 270). Miganhu.
kudzidza, kudzidza nemuromo, kudzidza kudzidza, masitaera ekudzidza
Kudzidza masitaera: maviri akaipa nhau (asiwo maviri akanaka)2021-08-232021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/stili-di-apprendimento.-due-cattive-notizie-ma-anche-due-buone.jpg200px200px
Matekiniki Ekusimudzira Kudzidza: Ndeapi Chaizvo Anobudirira? Chikamu 1
Kuvandudza kuzvidzora pachako pakudzidza uine chiratidzo chiri nyore
Dyslexia. Ndeipi nzira yekufunda?
Migumisiro yecovid pamabasa ekuzivaNeuropsychology